Kutaan itti aanu matduroota gargaarsa baafatoota fi qaaqootaaf oolan tarreessa.
Baafatni kun ajajaawwan qabeentoota galmee ammaa keessa jiran gulaalaf fayyadan qabata .
Bafatii kun, ajajawwan galmichaa agarsiissaa agartiirraa too'atan of keessaa qaba.
Bafatii kun, ajajawwan isa miseensa haaraa galmee keessatti fakkeenyaaf, saxaatoo, wantawwan, arfiilee addaa fi faayiliiwwan kabiroo saaguuf fayyadu of keessaa qaba.
Ajajawwan teessuma dhangeessuu fi qabeentoota galmee keetii of keessaa qaba.
Meeshaalee qubeeffannoo, kuusaa faayaa tokko kan faayoo wanta isa ati galmee keessatti ida'uu dandeessuu, akkasuumas meeshaalee bafatawwan qindeessuu, fi fedhiilee sagantaa ijaarsaa of keessaa qaba.
Ajajoota foddaa galmee irratti hojjechuu fi agarsiisuu of keessatti qaba.